U-Yoshitoshi, omnye wabakroli baseJapan abaziwayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Inkcubeko yaseJapan yamandulo evela esandleni sikaYoshitoshi omkhulu
Kumashumi eminyaka adlulileyo besikhona ngaphambili amagcisa amakhulu kunye nemifanekiso evela eJapan Kwaye babe ngabanduleli bemanga. Eminye imitya yamaJapan ehlekisayo ethe yasasazeka kuyo yonke indawo kwaye namhlanje ikhukula zonke iivenkile ezikhoyo kwiidolophu needolophu zelizwe lethu.
Ngaphambi kwaloo anime, kwakukho abaculi abathile bemifanekiso ababengabo Baqokelela inkcubeko yaseJapan njengakuTsukioka Yoshitoshi omkhulu, umkroli wenkulungwane ye-XNUMX. Umbonisi wamaxesha akhe apho abonisa khona ngokukrola kwakhe ezona zinto zibalulekileyo kwinkcubeko yelizwe laseJapan.
I-Ukiyo-e yindlela yokukrola esetyenziswa yile Inkulungwane ye-XNUMX yomkroli waseJapan kwaye luhlobo lomthi esinokuthi silubonakalise njengemizobo yelizwe elidadayo. Imizobo ebaluleke kakhulu edolophini apho iinoveli zithengisa ngakumbi ukuba zibonisiwe.
Oku kukhokelele ekuprintweni okuzimeleyo kuyilwe kwaye Imveliso njengemanga namhlanje. Into ehlekisayo kukuba umxholo wayo ubususela kwinkcubeko ephezulu ukuya kufudumala, phantse uchukumise nakwesiphi na isihloko esasiqwalaselwe ngakumbi ngabakumgangatho ophakathi kunabo babekwizikhundla eziphezulu.
UTsukioka uvelise imisebenzi yemizobo ye ngesondo, ubundlobongela kunye nexhala kunye nemiboniso yedabi enegazi enegazi ngoku esibhekisa kuyo njengonyaka. Umzobi obefanele ukujongana nobomi bakhe, ngaphandle kokuthandwa kakhulu, sisifo sakhe sesinyithi esiye saqhubeka nokuba mandundu de wangeniswa kwisibhedlele sabagula ngengqondo ukuba asweleke ngoJuni 9, 1892 eneminyaka engamashumi amahlanu anesithathu.
Umzobi owayenayo ngaphezulu kwabafundi abasibhozo kwaye ngubani obenconywa ngomsebenzi wakhe "Iinxalenye ezilikhulu zeNyanga", uthotho lweerekhodi ezibonisa imbali yaseJapan kunye neyaseTshayina kunye namabali.
Umzobi okhethekileyo kuye uvakalelo kunye nokunconywa kwabasetyhini ebonakalise, ngelixa emsebenzini wakhe kukho ithoni yomntu, nangona ebethetha ngemixholo eyahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Inkcubeko yaseJapan yamandulo evela esandleni sikaYoshitoshi omkhulu
Hyperspektiv, nika iifoto kunye neevidiyo zakho idosi yeziphumo ezimangalisayo
Iifoto zobusuku bemilingo zezitrato zaseTokyo nguMasashi Wakui